निजी शिक्षालयका सञ्चालकलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष नियुक्त
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को उपाध्यक्षमा निजी शिक्षालयका सञ्चालक खगेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जिल्ला निवासी अधिकारीलाई असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो
काठमाडौं । रामेछापमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिर्माणको कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा २५ प्रतिशत भवन निर्माण सुनिश्चित भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई )शिक्षा) जनाएको छ । शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको विद्यालय पुनःनिर्माण विषयक भर्चुअल सम्वादमा विद्यालय पुनर्निर्माणमा
सिकाइ निरन्तरता दिन वैकल्पिक कक्षाःप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिकको सिकाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरिएकाले सबैलाई सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सोमबारदेखि रेडियो र टेलिभिजनबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले वैकल्पिक कक्षामा सहभागी
काठमाडौँ, जेठ ३२ गते । कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खुल्न नसकेको स्थितिमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट देशभर पढाइ हुन थालेको छ । सरकारले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन भनेपछि
अर्थमन्त्री खतिवडा प्रश्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सहयोग लिन्न भन्ने ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयल सञ्चालकहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्छु भन्दा त्यो लिन्न हुँदै हुन्न भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । सोमबार संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई दिन नभई शैक्षिक गुणस्तर सुर्धान
बजेटले विद्यमान शैक्षिक समस्या सम्बोधन नगर्ने ठहर
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बजेटले कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न र विद्यमान शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल शिक्षा संवाद ‘बजेटमा शिक्षाः अपेक्षा, आवश्यकता र सम्बोधन’का
भर्च्युअल कक्षा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका बीच भर्च्युअल कक्षा सञ्‍चालन,अनलाइन शिक्षा र रेडियो टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्‍चालन गर्ने तयारी अघि वढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । शिक्षाका
सिकाइ रुपान्तरणमा प्रश्न उठेकाले नयाँ ढंगको शिक्षक तालिम आवश्यकःडा.थपलिया
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाले विद्यार्थीको सिकाइमा रुपान्तरणमा प्रश्न उठेकाले नयाँ ढंगको शिक्षक तालिम आवश्यक भएको बताएका छन् । बदलिदो परिस्थितीमा शिक्षक तालिम पुरानै शैलीमा चल्न नसक्ने भन्दै नयाँ परिवेश र चुनौतीसँग तालमेल खाने तालिम आवश्यक रहेको उनले
शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै ढर्रा, नयाँ धार पक्रने अवसर सरकारले गुमायोः शिक्षाविद्
काठमाडौं । सरकारले शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्रामा अघि वढाउन लागेको भन्दै शिक्षाविद्ले चिन्ता प्रकट गरेको छन् । शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ धार समात्ने थुप्रै अवसर रहेपनि शिक्षाका कार्यक्रम भने परम्परागत ढंगले नै आएको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । शिक्षा पत्रकार
लकडाउन नखुलेसम्म सुदूरपश्चिमका विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौःसामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन नखुलेसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विद्यमान अवस्थामा विद्यालय खोलेर पढाइ सञ्चालन गर्ने र अनलाइन माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न
प्रकृति प्रेमी शिक्षा खोई ?
भौतिक विज्ञानको विकास कारण प्राकृतिक विनासको उपज, आज के घर के समाज, पूरै बन्दाबन्दी अवस्थामा छ । एउटा जीवाणुसँग लड्न नसकेर विश्व अक्रान्त बनेको अवस्था मानव समक्ष खडा भएको छ । भाइरसले विकासको शिखर चुम्ने र निकै वैभवशाली ठान्ने राष्ट्रहरुको समेत निन्द्रा भङ्ग गरेको छ । तर, मानव अझै आफ्नो चिन्तन परिवर्तन गर्न
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले कक्षा १२ को परीक्षा लिने मात्र राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले लिन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक संकटमा रहेकाले केन्द्रीय स्तरमा होम सेन्टर कायमगरी कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बागमति प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री
प्रकाश सिलवाल/रासस कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई स्थिति सहज भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीबीच आज छलफल भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आज सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई मध्ये नजर गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ७ चैत्रदेखि हुने सम्पूर्ण परीक्षा तथा सबै तहको पठनपाठन स्थगित गरेको छ । बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेल संयोजकत्वको ुकोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णय अनुसार
त्रिविको परीक्षा निर्धारित मितिमै सञ्चालन हुने !
काठमाडौँ, फागुन २७ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसका कारणले कुनै सङ्कट नदेखिएकाले त्रिविले स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो
काठमाडौं । दुइ दशकदेखि शिक्षा पत्रकारितामा सक्रिय शिक्षा पत्रकार समूहका १० औं अधिवेशनले तुला अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । सोमबार सम्पन्न अधिवेशनले समूहको उपाध्यक्ष कृष्ण मल्ल, महासचिव जनक नेपाल, सचिव श्याम तण्डुकार र कोषाध्यक्षमा ममता थापालाई सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गरेको
अमरवाणी संवाददाता/ काठमाडौं । पशुपति बहु्मुखी क्याम्पसमा उत्कृष्ट प्राध्यापकलाई दिनुपर्ने पुरस्कार तीन वर्षयता सहायक क्याम्पस प्रमुखत्रय र कार्यक्रम संयोजकलाई मिलाएर प्रदान गरिएका छ । कलेजले प्राध्यापकलाई थप उत्प्रेरणा मिलोस् भनेर हरेक वर्ष चार जना उत्कृष्ट प्राध्यापक (एक जना महिला समेत पर्ने गरी)
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताए । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको आयोजनामा मंगलबारदेखि शुरु भएको प्राविधिक रोजगार मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकेमात्र मुलुकको विकास हुने बताए । ‘सरकारले
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारी गर्न मातहतका क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थी कल्याण महाशाखा प्रमुख गङ्गाबहादुर थापाले आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियु निर्वाचनको तयारी गर्न त्रिविका ६२ आङ्गिक क्याम्पसलाई सोमबार पत्र पठाउँदै
हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा सम्बन्धी तीन ओटा विधेयक ल्याइनेःमन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा सम्बन्धि तीन ओटा छुट्टा–छुट्टै विधेयक ल्याइने तयारी भइरहेको बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा नीतिको मर्म बमोजिम विद्यालय तह, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि
घरको सामल भाग्योदयको वास !
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्र शाँखुबाट लप्से पुग्न एक घण्टाभन्दा वढी हिड्नु पर्छ । सधैं दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय आवत–जावत गर्दा समय त्यतिकै खेर जान्छ । त्यसैले लप्सेकी १५ वर्षीय सरू घलानले छात्रवासमा बस्ने निर्णय गरिन् । उनी शाँखुस्थित भाग्योदय माविको छात्रावासमा
त्रिविको ४५औं दीक्षान्तमा १० हजारको आवेदन
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुनका लागि अनलाइन फाराम आह्वान गरेपछि दीक्षित हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको पाइएको छ। यस वर्ष हुने ४५औं दीक्षान्त समारोहमा १० हजार १७८ विद्यार्थीले दीक्षितका लागि आवेदन दिएका छन्। त्रिविले गत वर्षदेखि अनलाइन फारामको व्यवस्था गरेदेखि
वढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क फिर्ता दिन मेडिकल कलेजलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिए। ‘१५ दिनभित्र विद्यार्थीका
देश कालापानीमा एकतावद्ध छ, अनशन तोड्नुस् : शिक्षामन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसी १७औं पटकको अनशनका लागि डडेल्धुरा पुगेका थिए । अनसन बसेको एक साता बित्न नपाउदै डा. केसीको स्वास्थ्य अबस्थामा समस्या आएपछि मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार
त्रिविमा २१ अर्ब बेरुजू, कत्रो बेतिथी ? उपकूलपति बाँस्कोटा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयमा व्यापक ‘वेतिथी’ रहेकाले त्यसलाई चिर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उपकूलपतिको पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले त्रिविमा २१ अर्ब बेरुजू रहेको भन्दै यसको कारक
काठमाडौं । भीमसेनगोलास्थित मोर्डन कन्या मल्टिपल कलेजले आइतबार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एक सय ११ औं जन्मजयन्ती मनाएको छ । प्रत्येक वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन मनाइने महाकवि देवकोटा जयन्तीमा उनको साहित्य योगदानको चर्चा गर्दै मनाइने गरिन्छ । कलेजका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद दाहालले कलेजले निरन्तर रुपमा
काठमाडौं । पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक भरत विक्रम वि.सी. र लेखापाल बद्रीप्रसाद पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । विहीबार दिउँसो उनीहरुलाई विद्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरिएको हो । क्यान्टिन निर्माणमा सेवाग्राहीबाट घुस लिएको
तीन विश्वविद्यालयमा कामु उपकूलपति,सर्च कमिटी किनारा साक्षीमात्रै
काठमाडौं । उपकूलपति छनोट कमिटीले नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत चार ओटा विश्वविद्यालयको नेतृत्व कायममूकायम (कामू) लाई दिइएको छ । उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गर्नु अघि विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यवाहकलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेका हुन्